Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamadii Dambiilayaashii Afduubay Madaxdii ONLF oo Dib Loogu Dhigay Codsi Qareenkooda ah
Maxkamadii Dambiilayaashii Afduubay Madaxdii ONLF oo Dib Loogu Dhigay Codsi Qareenkooda ah
Posted by ONA Admin	/ May 14, 2014
Saakay abaarihii 9:45 am SaacadaNairobiayaa maxkadadaMilimani Court waxaa kasoo hor muuqday dambiilayaashii ka dambeeyey afduubkii loogu gaystayNairobilabadii masuul ee kamidka ahaa Ururka ONLF.Dabiilayaashan oo ka kooban afar Nin oo kala ah laba nin oo Soomaali (Garre) iyo laba Madow (Kenyan) ah ayaa la keenay maxkamada.
Balanta waxay ahayd maanta in la dhagaysto kiis kooda hasa ahaatee dib ayaa loo dhigay kadib markii uu codsatay Qareenkii u doodayey oo sheegay in uu shalay soo gaadhay dacawadii laga qoray markhaatiyadii ku furi lahaa dambiga ay nimankan galeen.
Afartan nin oo lakala yidhaahdo 1- Xassan Aadan Bunaya 2- Bilow Cali Cabdi 3- Mr Painito Bera Ngangai 4- Mr James Ngaparini Sipiti ayaa maxkamadooda waxaa dib loo dhagayasn doonaa 28 July 2014.
Nimankan ayay u adeegsatay xukuumada Itobiya inay usoo af-duubaan laba mudane oo kamid ahaa jabhadda ONLF 28kii JAN. 2014. Labaas mudane oo lagu kala magacaabo Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Axmed Xuseen ayaa ku sugan xabsi ku yaala Harar sidau ku warameen dad xog-ogaal u ah arintooda. Itobiya ayaa ku guuldareysatay inay madaxdan u adeegsadaan dacaayadii caadiga u ahayd Itobiya oo ahayd way isa soo dhiibeen, iyadoo caalamka meela badan laga cambaareeyay afduubka loo gaystay madaxda ONLF oo ahaa eregadii uga qayb gashay ururka wadahadaladii u furmi lahaa Itobiya iyo ONLF.
Sida ilo xog ogaal ah ay sheegayaan waxaa kale oo jira niman Soomaali ah oo kiiska afduubka madaxda ONLF kula jiray oo ay raadinayaan police-kaKenya.